48 ora any Ottawa, Kanada: Ny lalana tsara indrindra
Ahoana no handany 48 ora any Ottawa?
Na i Vancouver, Toronto sy Montreal no tanàna malaza indrindra fantatry Kanadiana, i Ottawa no renivohitra nasionaly. Aza asiana fitondran-tena tsy misy dikany amin'ny tanàna.
Tahaka ny maro amin'ireo tanàn-dehibe tsara indrindra eran'izao tontolo izao, i Ottawa dia manomana ny fikarakarana ny firenena amin'ny làlan'ny tranombakoka (toy ny tranom-bakoka maro), ny haitao sy ny zava-bitan'ny governemanta ary ny tantara.
Mipetraka eo amin'ny firongatry ny renirano telo lehibe any avaratr'i Ontario, i Ottawa dia manana fombam-boly voajanahary tsara tarehy sy malalaka amin'ny habakabaka maitso sy rano, anisan'izany ny lakandranon'i Rideau izay mamakivaky ny tanàna. Ny fametrahana famerana haingam-pandeha sy toeram-pialan-tsasatra dia mitazona ny tanàna amin'ny toerana ambony sy mendrika hivezivezy.
Ity tanànan'i Ontario ity dia manana toeram-pambolena, nefa mahafinaritra. Raha toa ka zava-dehibe ny safidin-tsakafo sy ny fividianana an-tsika dia mety handiso fanantenana an'i Ottawa, fa ny fahatsapana ho an'i Canada sy ny mponina amin'ny alàlan'ny fitsaboana dia ity no toerana.
Ny tolakandron'ny andro & Andron'ny hariva
2 pm: Jereo ao amin'ny hotely. Ny Château Laurier, hotel Fairmont, dia iray amin'ireo trano lehibe indrindra any Ottawa. Ny tranom-panjakana gôtika frantsay sy ny trano anatiny mahatalanjona dia hahatonga anao hahatsiaro ho rava. Plus, ny toerana dia avo lenta.
Na dia tsy mijanona eto ianao dia afaka mandao dite ambony na mandehandeha any amin'ireo efitrano manan-tantara, toy ny iray amin'ireo hotely manan-tantara ao amin'ny hotely Fairmont Fairmont izay manisa ny firenena. Aza hadino ny manararaotra ny sarin'i Yosuf Karsh sary ao amin'ny gorodona voalohany. Hahafantaranao angamba ny ankamaroan'izy ireo - izy ireny dia misy sary mihetsika malaza indrindra eran'izao tontolo izao.
Fitateram-bahoaka manodidina an'i Ottawa dia tena tsara. Maka andro iray (CDN $ 10.25 amin'ny taona 2017) raha toa ka mikasa ny hampiasa azy betsaka.
3 ora tolakandro: Mipetraha haingana mankany amin'ny National Gallery of Canada. Ny tranobe misy glasy sy granite mahavariana dia manana asa mahatalanjon'ny kanadiana, indizeny ary iraisam-pirenena mahatalanjona ary manasongadina fampirantiana zava-mahatalanjona mandritra ny fizaran-taona. Mitadiava fomba fijery mahatalanjona amin'ny tranoben'ny parlemanta Kanada avy ao anatin'ny tranom-bakoka. Aza adino ny mahazo sary miaraka amin'ilay zana-trondro goavam-be - Louise Bourgeois's Maman - izay mitahiry ireo mpitsidika ivelan'ny galeria.
6 hariva: Asandrato ny lohanao ao amin'ny Basilica Notre-Dame hijery ny atidohany mahatalanjona alohan'ny hamaranana ny lalana mankany amin'ny Market ByWard. Ny toetran'i Ottawa iray dia manintona ny manodidina ny trano fonenana, galleries ary trano fisakafoanana. Ankoatr'izany dia manolotra tsena isan-taona amin'ny tsenan'ny tantsaha izy, saingy mihodina manodidina ny 5:30 hariva.
8 ora hariva: Rehefa mitsangatsangana ny tsenan'ny Byward, mitoera amin'ny sakafo Eoropeana miaraka amin'ny alikan'ny alemà ao Das Lokal, manakaiky ny firoboroboan'ny mpizahatany sy ny firoboroboan'ny tsena. Hevitra tsara ny namandrika toerana ho an'ity toeram-pisakafoanana mafana ity izay manolotra menio fanontana, saingy ampahany tsara. Andraso ny pio eo amin'ny faran'ny herinandro.
Tsy vonona amin'ny fandriana? Atsaharo ny Highlander Pub ho an'ny kapaoty alina. Ity pobralin'ny Scottish ity dia manana fifantenana singa tokana sy malala ary mahafinaritra an-tokotany ivelany, tonga lafatra amin'ny fahavaratra mandritra ny fahavaratra.
Maraina sy tolakandro andro roa
8 octobre: Raha mbola mibanjina sy malemy ianao, dia manaova politika Politika ao amin'ny Parlemanta. Na dia mety hitan'ny sasany aza ny fitenenan-dratsy, ny fitrandrahana Gothic amin'ny trano fonenan'ny governemanta Kanadà dia manapaka lanjany mahavariana eo ambonin'ny reniranon'i Ottawa.
Ny tapakila mandritra ny fitsangantsanganana maimaim-poana izay maharitra eo amin'ny 20 minitra dia misy eny amin'ny arabe ao amin'ny 90 Wellington Street manomboka amin'ny 9 maraina. Ny fitsidihana dia ahitana fitsangatsanganana ao amin'ny Peace Tower, izay manome fomba fijery tsara momba ny tanàna.
11 maraina: Manàna sakafo antoandro haingana sy salama ao amin'ny Cafe Nostalgica eo akaiky eo alohan'ny handehanana any amin'ny National War Museum. Na dia firenena tia fandriampahalemana i Kanada, ity tranombakoka ity dia manome lalana mahaliana amin'ny alàlan'ny tetikasam-panjakana manokana, iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena amin'ny tantaran'ny tafika Kanada. Ireo asa soratra sy ny fampirantiana naseho dia mampita ny traikefan'ny vehivavy, lehilahy ary ankizy niaina tamin'ny fifandonana izay nahatonga an'i Kanada, Kanadianina sy izao tontolo izao.
Ny safidy hafa momba ny tranombakoka izay mety kokoa noho ny tombontsoanao dia ahitanao ny mozika Royal Canadian Mint sy Currency, izay ahitana mpanangom-bokatra sy vola fahatsiarovana, vola madinika volamena, medaly ary medaly. Ny mpanazatra tsara tantana ny mena dia mandray vola mahaliana. Afaka mitsidika azy ity.
Ny Fitsarana Tampon'i Kanada ihany koa no fitsarana avo avo indrindra ao amin'ny firenena. Ireo mpitsidika dia asaina hanadihady ilay trano, izay manamarika ny firafitrasany sy ny fanangonam-bokatra ary koa ny mianatra momba ny fandaminana ny rafi-pitsarana Canadian avy amin'ireo mpitarika ny mpitsidika, izay mpianatra rehetra.
2 ora tolakandro: Hitondra mozika iray mialohan'ny hivoahana ny andro: Ny tranom-bakoka kanadianina momba ny tantara, izay any Gatineau Quebec, dia 25 minitivo miala amin'ny Alexandra Bridge. Raha tsy ao anaty karaoke ny mandeha an-tongotra, dia afaka mitondra taxi aqua manerana ny Reniranon'i Ottawa amin'ny fahavaratra, manofa bisikileta na maka fiara fitateram-bahoakam-bolo 15 minitra. Ny tranom-bakoka mandroso dia manintona sy manintona ara-javakanto ary manangona fanangonan-javatra tsy manam-paharoa izay mampiseho ny tantaran'i Kanada.
Andro iraisana roa
5 ora hariva: Miverena any Ottawa, mijanòna any Nepean Point, fitsidihana fotsiny eny ambonin'ny tetezana izay manolotra fahitana ny tanàna sy sarivongana fahatsiarovana an'i Samuel de Champlain, mpanorina an'i Kanada.
(Raha ririnina dia azonao atao ny manamboatra skateau ao amin'ny lakandranon'ny Rideau, izay manala baraka amin'ny ririnina ho lasa sambo goavana indrindra eran-tany.)
6 ora hariva: Mba tsy hanimba ny sakafo hariva, sasao ny mofomamy BeaverTail miaraka amin'ny mpiara-mitory aminao amin'ny toerana ByWard Market, satria ity no fitondrako matsiro nataon'i Ottawa. Miantso azy ireo hoe inona izy ireo - kobanina matsiro matsiro - tsy azo atao ny manao ny rariny.
7 ora hariva: Mba hialana amin'ny faritr'ireo mpizahatany ao Ottawa noho ny fambara, dia mialà any Westboro, tanànan'ny hipster any an-tanàn-dehibe izay misy toeram-pivarotana na yoga dia tsy lavitra. Manana toeram-pivarotana lehibe sy toeram-pivarotana maro ny faritra ary folo minitra avy ao amin'ny Parlemantan'i Hill.
Tsidiho ny tanànan'i Westboro miaraka amin'ireo mponina ao an-toerana hatramin'ny fotoana fisakafoanana ao Vittoria ao amin'ny Village ao Richmond Street.
10:30 PM: Mijanòna lava ampy mba hanana kapa amin'ny alina. Loha mankany amin'ny mena sy kintana miora, ao amin'ny trano fidiovana faha-16 ao amin'ny Andaz Hotel - io no baraingo avo indrindra ao an-tanàna.
Andro fahatelo maraina
8 maraina: Hanomboka ny farany ny maraina Ottawa eo an-tongotra havanana, dia manolora any amin'ny Witch Scone ao amin'ny Elgin Street . Izany dia toerana be atao, fa ny hazavana kosa dia maivana, mavo ary mafana. Feno miala sasatra malalaka fa voafetra ny seza, noho izany ny taloha, ny tsara kokoa. Mitandrema ny scones mba handeha.
Ho an'ny sakafo matsiro kokoa, misakafo amin'ireo mpanao politika sy mpizahatany tsara tarehy ao amin'ny buffet à Chateau Laurier's buffet Wilfrid.
10 maraina: Fiaramanidina izay misakafo miaraka amin'ny Tendrombohitra roa mandeha an-tongotra mitaingina mandeha amin'ny lakandranon'i Rideau miaraka amin'ny VeloGo fizarazarana bisikileta (toerana samihafa, manokan-tena) na miaraka amin'ny olona mahafinaritra ao Rentabike ao amin'ny Rideau Street. Ampidino koa ny lalanao mankany amin'ny farihy Dow mba hialana amin'ny sambokely, kayak na lakana.
Raha andro mahatsiravina na mila tranom-bakoka iray hafa ianao ao amin'ny fandefasanao, Diefenbunker, Museum of Cold War of Canada, dia fijery mahavariana amin'ireo bunkera nateraky ny nokleary nataon'ny Governemanta Kanadà tamin'ny alàlan'ny Ady Mangatsiaka. Tokony ho 40 minitra miala ny Havoanan'i Parlemanta, fa iray amin'ireo trano miorina tena tsara indrindra any Ottawa, indrindra ho an'ny ankizy.
Top Romantic Attractions of Ottawa for Couples
Fomba fialantsasatry ny Girlfriend in Ontario
Torolalana ho an'ny Festival Tulip Kanadà any Ottawa
Aza manadino an'ireny toe-javatra ireny any Ottawa
Fiaraha-monina tsara indrindra ho an'ny Krismasy Krismasy any St. Louis
Ny Torolalana ho an'ny Dianao ho any amin'ny Nosy Head Island any Caroline Atsimo
Toerana mankany San Francisco
Ny Artista Street Cool mba hikaroka any Queens
Skate Parks any Washington DC, Maryland ary Virginia
Seville mankany Granada amin'ny Train, Bus ary Car
Fihetsika 3 tsy tokony hohadinoina tao Oahu
Ny sakafo tsara indrindra sy sakafo tsara indrindra any Queenstown
Mitondra Fiara Tsara kokoa ve ny Mitsidika An'i Eoropa?